အယ်ဖိုး: October 2009
Posted by Peace at 7:55 PM0comments Links to this post
Torrent အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
အားလုံးမင်္ဂလာပါ.အခုပြောပြချင်တာက Torrent ဖိုင်လေးတွေအကြောင်းပါ... အချို့လဲသိပြီးသား..သုံးဖူးပြီးသား ဖြစ်ကြမှာပါ.. အချို့သော ၀က်ဆိုဒ်တွေနဲ့ ဘလော့ဂ်တွေမှာ Software တွေ၊ Game တွေနဲ့ Movies တွေ .. စတာတွေကို Torrent ဖိုင်လေးတွေ အဖြစ်နဲ့ Upload တင်ထားတတ်ကြပါတယ်.. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီအတိုင်းတင်မယ်ဆိုရင်.. File Size ကန့်သတ်ချက်တွေ ရှိနေလို့ပါဘဲ..Torrent ဖိုင်လေးတွေအဖြစ် ပြောင်းပြီးတင်မယ်ဆိုရင် CD/DVD တစ်ချပ်စာမက တင်ထားနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်..အဲဒါတွေကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲဖို့အတွက် Torrent Downloader တွေ အများကြီးရှိတဲ့အနက်က ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ Bit Torrent Downloader အကြောင်းကို ကျွန်တော်သိသလောက် အနည်းငယ်တင်ပြ လိုပါတယ်။ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများအနေဖြင့် လိုအပ်ချက်များ ကိုဖြည့်စွက်ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ..
၁။ ပထမဆုံး Bit Torrent ကို ဒီမှာ ဒေါင်းလုပ်ယူပြီး Run လိုက်ပါ။
၂။ အရေးကြီးတာက မိမိလိုချင်တဲ့..Software, Movies နဲ့ Game တွေရဲ့ Torrent ဖိုင်လေးတွေကို အရင်ဆုံး ဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီဒေါင်းလုပ်ယူထားတဲ့ Torrent File လေးကို Double-click နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်တာနဲ့.. Bit Torrent အလိုလိုပွင့်လာပြီး.. ဒေါင်းလုပ်ဆက်လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်.. Bit Torrent ပွင့်မလာဘူးဆိုရင်တော့ Torrent File ကို Right Click ထောက်ပြီး Open with မှာ Bit Torrent ကိုရွေးလိုက်ပါ။
၃။ File Size ကြီးတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ၊ ဂိမ်းတွေကို Bit Torrent နဲ့ဒေါင်းလုပ်ယူတဲ့နေရာမှာ.. ချက်ချင်းကြည့်ချင်၊ သုံးချင်လို့တော့ မရပါဘူး.. တစ်ခါတစ်လေ တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်အထိ ကြာတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ရုပ်ရှင်ဆိုလည်း ၃-၄ ကားတစ်ပြိုင်တည်းဒေါင်းလုပ် လုပ်ခိုင်းထားသလို၊ ဂိမ်းဆိုလည်း ၄-၅ မျိုးလောက် တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ခိုင်းထားပါသည်။ လူသာအိပ်တယ်..ကွန်ပျူတာကိုတော့ မအိပ်ခိုင်းတဲ့သဘောပေါ့။ အောက်က ပုံလေးအတိုင်းပေါ့..
Torrent အကြောင်းကို ဒီနေရာမှာ အသေးစိတ်ရေးထားပါတယ်။ သွားရောက်ဖတ်ရှုလေ့လာကြပါခင်ဗျာ..
Posted by Peace at 2:16 PM0comments Links to this post
Posted by Peace at 12:40 PM0comments Links to this post
မိမိတို့ရဲ့ ဖိုင်တွေ၊ Folder တွေကို လုံခြုံစိတ်ချဖို့အတွက် Folder Lock ကို သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ အရင်က ဖော်ပြခဲ့ပေမယ့် အမြဲတမ်း မသုံးစွဲနိုင်တာရယ် ဒေါင်းတဲ့လင့်တွေ သေသွားတာရယ်ကြောင့် အခု ထပ်မံ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင် Note File ထဲမှာ ကုဒ်တွေ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဒီတွင် Download လုပ်ယူပါ။
Folder Lock ဆော့ဝဲလ်ကို Install လုပ်ပြီးပါက User ID တွင် TEAM HERITAGE နှင့် Key Password တွင် 683071673 ကို ဖြည့်ပါ။ ဒါဆို အမြဲတမ်းသုံးနိုင်ပါပြီ။ ဆော့ဝဲလ်ဘောက် ပေါ်လာချိန်တွင် password သည် မိမိပေးချင်သည့် အရာကို ပေးပါ။ နှစ်ခါ ပြန်ရိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Lock Folder ပေါ်လာပြီ မိမိတို့ သိမ်းချင်သည်များကို သိမ်းဆည်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Peace at 12:38 PM0comments Links to this post
MAGIX Movie Edit Pro 15 Plus ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Video တည်းဖြတ်ရေး program ပါ . အတော်လေးကို ကောင်းပါတယ် . video တည်းဖြတ်ရေးအတွက် ရိုးရှင်းတဲ့ အဆင့် ၃ ဆင့်ပဲ ပါပါတယ် . သူ့မှာပါတဲ့ effects များဟာ တစ်ကယ့် special effects များ ဖြစ်ခြင်း၊ နောက်ခံ သီချင်းထားများကို လွယ်ကူစွာ ထားနိုင်ခြင်း၊ ပြီးတော့ တည်းဖြတ်ရေး လုပ်ထားပြီးသား video များကိုလဲ DVD များအဖြစ် Burn နိုင်ခြင်းစတဲ့ တစ်ခြား video edition နှင့်မတူညီတဲ့ အားသာချက်တွေ အများကြီးပါ . ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်ပါပြီ . video edition အတွက် လိုအပ်နေသူများ အတွက်ပါ . ကျွန်တော် တစ်ပိုင်းကို 50 MB နဲ့5ဖိုင် ခွဲထားပေးပါတယ် . Download လုပ်ရတာ အဆင်ပြေအောင်လို့ပါ .
Download nyinaymin.net >>> Part(1) ၊ Part(2) ၊ Part(3) ၊ Part(4) ၊ Part(5)
Download ifile.it >>> Part(1) ၊ Part(2) ၊ Part(3) ၊ Part(4) ၊ Part(5)
Download mediafire >>> Part(1) ၊ Part(2) ၊ Part(3) ၊ Part(4) ၊ Part(5)
Posted by Peace at 2:44 PM0comments Links to this post
Posted by Peace at 2:04 PM0comments Links to this post
Nokia ကုမ္ပဏီဟာ တကမ္ဘာလုံးမှာ အကြီးဆုံးဖုန်းထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် များသောအားဖြင့် ကျနော်တို့ဆီမှာရှိတဲ့ Nokia ဖုန်းတွေက Original Quality ကိုမမှီတဲ့ဖုန်းတွေများပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ကျနော်တို့ရဲ့ Nokia ဖုန်းတွေဟာ Original ဟုတ်လားမဟုတ်လားဘယ်လိုကြည့်နိုင်မလဲ? ကျနော်ပြောပြပါ့မယ်။ သင့်ဖုန်းရဲ့
IMEI (International Mobile Equipment Identity) နံပါတ်ကိုစစ်ကြည့်ယုံနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။
ပထမ အဆင့်အနေနဲ့ *#06# လို့သင့်ဖုန်းမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ Serial No. တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီနံပါတ်ထဲက ၇ လုံးမြောက်နဲ့ ၈ လုံးမြောက် နံပါတ်တွေကို ကြည့်ရမှာပါ။
တကယ်လို့ အဲဒီနံပါတ်နှစ်လုံးဟာ 02 သို့မဟုတ် 20 ဆိုရင် သင့်ဖုန်းဟာ Emirates ကထုတ်တာဖြစ်ပြီး အရမ်းကိုညံ့ပါတယ်။
တကယ်လို့ အဲဒီနံပါတ်နှစ်လုံးဟာ 08 သို့မဟုတ် 80 ဆိုရင် သင့်ဖုန်းဟာ ဂျာမနီ ကထုတ်တာဖြစ်ပြီး သုံးဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။
တကယ်လို့ အဲဒီနံပါတ်နှစ်လုံးဟာ 01 သို့မဟုတ် 10 ဆိုရင် သင့်ဖုန်းဟာ ဖင်လန်နိုင်ငံ ကထုတ်တာဖြစ်ပြီး အရမ်းကောင်းပါတယ်။
တကယ်လို့ အဲဒီနံပါတ်နှစ်လုံးဟာ 00 ဖြစ်ခဲ့ရင် သင့်ဖုန်းဟာ Original စက်ရုံကထုတ်တာဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံး Quality ရှိပါတယ်။
တကယ်လို့ အဲဒီနံပါတ်နှစ်လုံးဟာ 13 ဆိုရင်တော့ အဇာဘိုင်ချန် ကထုတ်တာဖြစ်ပြီး အရမ်းညံ့တဲ့အပြင် ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ သုံးဖို့မသင့်တော်ပါဘူး။
Phone တိုင်းစစ်လို.ရပါတယ်ဗျာ.....။ စစ်ကြည်.ပါဦးနော်...တော်တော်ကြာပြသနာဖြစ်နေမှာစိုးလို.ပါနော်...။
Posted by Peace at 7:44 PM0comments Links to this post
Posted by Peace at 4:09 PM0comments Links to this post
ထိုင်းဖုန်းတွေ GSM 12 Call တွေအတွက် Free call လုပ်ပြီးခေါ်ကြရအောင်ဗျာ
Free GSM 12Call (Day/Night) လုပ်ချင်တဲ့သူများအတွက် ကျွန်တော်ရည်စူးတာပါ။ တစ်ချို့ ဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကိုယ်တိုင်ကို ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ဘာတွေထူးခြားနေတာလဲ ဘယ်လို service တွေပေးနေတယ်ဆိုတာကို မသိကြဘူးဗျ။ ကဲပြောနေကြပါတယ်ဗျာ။ နေ့ဖရီးကောဆိုရင် တစ်ခုတော့ရှိတယ်နော် GSM ဆိုရင် GSM ချင်းပဲ ဖရီးရမှာနော်။ နှစ်ချိန်ရှိတယ် မနက်(၅)ရီကနေ၊ ညနေ (၅)နာရီအထိက တစ်မျိုး၊ ည(၁၀)နာရီကနေ၊ မနက်(၁၀)နာရီအထိက တစ်မျိုး နှစ်မျိုှးရှိပါတယ်ဗျာ။ နေ့ဖရီးကောကိုလုပ်ချင်ရင် တစ်လကိုမှ ထိုင်းဘတ်ငွေ (၁၉၉)ဘတ်ကုန်ပါတယ်။ ညဖရီးကောကတော့ (၁၅၉)ဘတ်ကုန်ပါတယ်။ လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့..
Posted by Peace at 3:34 PM0comments Links to this post
Posted by Peace at 3:32 PM0comments Links to this post
Posted by Peace at 3:29 PM0comments Links to this post
Posted by Peace at 3:22 PM0comments Links to this post
Installing Windows from Memory Stick
Windows XP, Windows Vista, Windows7တို့ကို Memory Stick ကနေ Install လုပ်လိုသူတွေ အတွက် Software လေးတစ်ခု ထွက်ရှိလို့လာပါပြီ။ နာမည်ကတော့ Navicorp WintoFlash ပါ။ အခုမှ Beta version ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ File size လည်းသေးပြီး သုံးရတာလည်း အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ Wizard နဲ့ သွားရုံပါပဲ။
စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါ Prolink 4GB ထဲကို Windows XP ထည့်ပြီး Install လုပ်ကြည့်ပါတယ်။ ဘာ error မှ မရှိပဲ စီဒီခွေနဲ့တင်တာထက် ပိုပြီး လျင်မြန်စွာ install လုပ်သွားပါတယ်။
တစ်ခုအကြံပေးလိုတာကတော့ Windows တင်ရင် CD/DVD တွေနဲ့ တင်တာကပဲ အကောင်းဆုံးပါ။ အခုလို Memory Stick နဲ့ တင်တဲ့အခါ Stick မှာ read/write cycles တွေ တိုးလာတာမို့ Stick ကို လျင်မြန်စွာ ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ မသုံးမဖြစ် သုံးရမယ့်အခြေအနေမျိုးမှသာ သုံးသင့်ပါတယ်။
Download Link: http://ifile.it/s3ovf6h